Mahazo endri-javatra vaovao ny mpanampy an-trano Google! - Mpandahateny ao amin'ny Google Home Mini amin'ny teny poloney - SmartMe
Mahazo endri-javatra vaovao ny Google Assistant!
9 Janoary 2020
mpanampy feo, Mpanampy Google, Google
Afaka manampy ny fahombiazana ny Mpanampy Google. Efa misy any amin'ny firenena 90 izy io ary ampiasain'ny olona maherin'ny 500 tapitrisa. Miasa amin'ny teny poloney koa izy io. Iray amin'ireo fahombiazana amin'ity tranga ity ny fitohizan'ny fanampiana ny mpanampy. Tamin'ny CES tamin'ity taona ity, ny Google dia nanangana ny bara ho avo ary nanambara endri-javatra mahaliana vitsivitsy. Fantaro bebe kokoa ny fomba ahafahan'izy ireo manatsara ny fandidiana ny fitaovana.
Ny voalohany amin'izy ireo dia ny fikarohana automatique ireo vokatra azontsika ampidirina amin'ny Google Home - io fiasa io dia tohanan'ny version poloney ihany koa. Rehefa manamboatra vokatra vaovao ao amin'ny fampiharana amin'ny mpampiasa Android ny mpampiasa, avy eo dia hahazo fampahalalana avy hatrany momba ny mety hampifandraisana azy amin'ny Google Home. Bokotra toy izany no hiseho ao amin'ny Google Home app.
Ny endri-javatra vaovao iray hafa dia ny tsikera mifikitra hita miaraka amin'ny Google Assistant. Ao amin'ny efijery manan-tsaina, ankehitriny dia afaka mamorona karatra fampahalalana isika ary hizara izany amin'ny fianakaviana ho ampahany amin'ny fampiharana. Ny hany azontsika atao dia ny dikany amin'ny mpanampy izay tokony hosoratana amin'ny karatra ho antsika.
Ny fiasa manaraka dia "hetsika voalahatra". Azontsika atao ny milaza amin'ny Google hamerina ny fitaovana sasany, fitaovana sasany amin'ny fotoana iray. Ohatra, mpanamboatra kafe amin'ny enina maraina sy humidifier amin'ny valo. Mazava ho azy fa tsy maintsy hifanaraka amin'ny Google Home ny fitaovana.
Tsy ho ela dia lasa fampisehoana manan-tsaina ny findainao noho ny vokatra vaovao avy amin'ny Google
mode ambient, Android, Mpanampy Google, Google, fandefasana saina, fanehoana hafahafa
Nandritra ny fampirantiana IFA tany Berlin, izay nitranga tamin'ny volana septambra tamin'ity taona ity, nanambara ny andiany vaovao ho an'ny Mpanampy Google, Google izay hampiantrano amin'ny Android. Ny hamadika ny takelaka na ny finday anay ho fampisehoana an-tsaina hanapahana ny filàna ...
Fanavaozana iray hafa ny fahaizana mamaky mafy ny lahatsoratra iray manontolo, toa an'ity. Lazao fotsiny hoe "Hey Google, vakio izy" na "Hey Google, vakio ity pejy ity" dia hovakin'ilay mpanampy aminao ny zava-drehetra! Ho azo ampiasaina amin'ny fiteny 42 ny fiasa, ao anatin'izany ny tenin-tsika poloney!
Ilay Mpanampy Google dia afaka mamafa ny vaovao nomentsika azy tsy nahy ihany koa. Raha sendra miteny hoe "Ok Google" isika, dia afaka miteny hoe "Hey Google, tsy ho anao izany". Vokatr'izany dia hadinon'i Google ny zavatra rehetra nolazainay taminy. Hitarina ny safidy, satria afaka manafatra ilay mpanampy koa isika hamafa izay rehetra nolazainay taminy tamin'ity herinandro ity "Hey Google, hamafa izay rehetra nolazaiko taminao tamin'ity herinandro ity".
Araka ny hitanao dia misy safidy marobe ary mahafinaritra izany fa ny Google dia mampitombo ny mpanampy azy betsaka.
Loharano sy sary: Google Blog
Sary avy amin'ny Mitchell Luo na Unsplash
Araka ny hitanao dia ny fiasa vaovao azo alaina amin'ny alàlan'ny Google Assistant, izay ampidirina amin'ny Google Home ihany koa, dia manitatra ny fahafaha-manao an'io fampiharana io. Misaotra azy ireo fa mahomby kokoa ny fampandehanan-fitaovana sy ny fanaovana hetsika isan-karazany amin'ny Internet. Noho ny fisian'ny fiteny poloney dia afaka ampiasaina ao amin'ny firenentsika koa ny rindrambaiko.
Google Home - tsy maintsy ho tonga izany
Google dia efa ela no tsy nitsahatra nampifandray afa-tsy ny hegemon eo amin'ny sehatry ny milina fikarohana. Ny marika dia manolotra mpampiasa azy vahaolana am-polony, mampiasa vola tsy tapaka amin'ny fikarohana, fampivoarana ary fanombohana. Manjary sarotra hatrany ny mahita faritra izay orinasa iray miainga any Mountain View, Kalifornia tsy misy fampiharana na fitaovana. Ohatra iray ihany ny Mpanampy Google.
Hatramin'ny nahitana trano mahavokatra dia ny foto-kevitry ny trano manan-tsaina dia vao andro kely talohan'ny nipoiran'ny vokatra tamin'ny anarana hoe Google Home sy Google Home Mini teny an-tsena. Tsy azo lavina fa ho an'ny firenentsika maro, na izany aza, mijanona ho tsy fantatra anarana ireo fitaovana ireo. Ilaina ve ny miova? Na inona na inona momba ny fanamarinana farany izay omentsika amin'ny fampiasa amin'ny ankapobeny ny fitaovana, dia tokony ho fantatrao aloha ny fomba fiasan'izy io, inona ary inona ary inona no atolotra azy. Vidiny mahaliana (andrasana) dikan-teny poloney sy endrika mahaliana no azo antoka fa manome vahana an'io vahaolana io.
Inona no mpanampy ny Google Home?
Talohan'ny nanombohan'ny vondrona Amerikanina namorona andiam-pandrefesana Nest (Mini, Hub, Max), tamin'ny faran'ny taona 2016, dia nahazo ny laharam-pahamehana azy ireo mpiteny tsy miankina Google Home. Izy ireo dia mampiavaka amin'ny endrika cylindrical ary amin'ny dikan-teny fototra dia nianjera, loko fotsy sy fotsy. Raha mamadika na moana dia mampiasa malina, tsindrio bokotra. Hatrany am-boalohany, afaka manapa-kevitra ny hanolo ny takelaka miaraka amin'ny modely ara-materialy sy metaly ianao amin'ny loko mifanaraka amin'ny atiny manokana.
Tsy ampy herintaona taty aoriana, nisy tsimbadika kely kokoa amin'ilay fitaovana miaraka amina fampiasa mitovy amin'izany eo amin'ny tsena. Google Home Mini dia mpandahateny kely kokoa, raha oharina amin'ny famolavolana, ohatra, ... vato. Raha oharina amin'ilay voalohany, karazana lehibe kokoa, ny antsipiriany sasany momba ny fikirana tanana dia novaina sy nohavaozina taty aoriana.
Tamin'ny taona 2017, ny modely lehibe indrindra antsoina hoe Google Home Max dia mipoitra eny an-tsena ihany koa, miaraka amin'ireo mpikabary stereo, rafitra feo maranitra USB karazana C. Nanomboka tamin'ny taona 2019 dia nanomboka namorona ny teknolojia ireo orinasa amerikana ho ampahany amin'ny marika «Nest».
Fandraisana sy fampiharana Google ao an-trano
Ny rafitra antsoina hoe mpanampy Google dia miankina amin'ny baiko amin'ny feo. Izany no mahatonga ny teboka rehetra amin'ny fandaharana ny fanamafisam-peo tsy miankina amin'ny Home Home na Google Home Mini dia ny fampiasana ireo mikrôby naorin'izy ireo.
Fanamarihana lehibe momba ny fiteny poloney. Araka ny natoronay tao amin'ny lahatsoratra, ny kinova poloney amin'ny fiasa famakiana dia iray amin'ireo zava-baovao izay azo antoka fa hahasoa. Ny olana dia mbola tsy naseho sy nampiharina tanteraka teo amin'ny tsenanay ilay fitaovana. Ny fiteny poloney dia niteraka resabe sy fisalasalana maro. Ny mpampiasa Google Home Mini sasany, zatra mifehy ny baiko anglisy, dia mety ho gaga rehefa mamaly ny teny poloney ny fitaovana na ... mamaly amin'ny alàlan'ny voambolantsika. Sarotra ny olana, saingy azontsika atao ny mieritreritra fa rehefa mandeha ny fotoana, miaraka amin'ny fampahalalana ny teknolojia marani-tsaina, ny fampiharana Google rehetra dia ho hita amin'ny fiteny poloney tsy misy fameperana na fahasarotana lehibe.
Ny fanaraha-maso jiro
Ohatra iray nampiharin'ny mpiara-miasa Google amin'ny fifandraisan'ny Google Home dia ny fifehezana ny feo amin'ny jiro. Ny mpampiasa Smart dia matetika manomboka amin'ny lafiny andavanandro toy ny fitantanana lavitra, malefaka na mavesatra haingana kokoa. Hafatra iray amin'ny feon-peo - tenimiafina napetraka - ampy hamonoana na hamadika loharanom-pahazavana iray na maromaro na inona na inona amin'ny misasakalina alina, sahirana ny tananao na miditra ao anaty trano fotsiny ianao rehefa avy maizina.
Ny fifehezana Multimedia
Aza adino fa Google Home dia mpandahateny ary ilaina ny mampiasa ny asany fototra. Satria izy ireo mandray ny baiko natokana ho azy, azon'izy ireo atao, ohatra, ny mampihetsika ny onjam-peo Internet tiany amin'ny alàlan'ny TuneIn na kapila manokana azo alaina ao amin'ny Spotify amin'ny teny miafina. Ny fitantanana ny haino aman-jery amin'ny feo dia mihoatra ny mozika fotsiny. Ny tolo-kevitray dia mety mihatra amin'ny chromecasts, YouTube, TV Android na koa konsolan'ny lalao Xbox.
Ny tohan-kevitra momba ny "eny" dia fampiononana indray. Indraindray ny hira iray "tonga ao an-tsaintsika" ary ny fihomehezana mangina dia tsy ampy - te hihaino azy avy hatrany isika. Midira fotsiny ny lohateny sy ny baiko mety. Sarotra be ny manahirana ny mpanampy amin'ny Google.
Fandraisana amin'ny fampahalalana
Na dia eo aza ny tsy fisian'ny fanohanana feno amin'ny fifandraisana amin'ny mpanampy Google amin'ny teny poloney, ny fahalalana amin'ny teny anglisy dia mamela anao hahazo mora foana ireo fampahalalana azo ampiharina amin'ny feo. Ahoana ny toetr'andro Amin'ny firy izao no misokatra ny tsena lehibe? Ny fampahalalana izay angonin'i Google sy ny dingana azo ampitaina amin'ny alàlan'ny baiko, tsy mila mitady azy ao amin'ny telefaona na solosaina. Ny fampahatsiahivana dia manana tombontsoa mitovitovy amin'izany - fa tsy ny fametrahana azy ireo amin'ny fomba ara-dalàna, ny hany ataonao dia ny "filaminana" ary ny Home or Home Mini dia mifehy ny fotoana, ohatra ny mahandro sakafo.
Ny lohahevitr'ilay lahatsoratra, izany hoe ny fiasa hafa an'ny fitaovana noresahina, dia mitarika fanondroana tombony hafa. Eny, ny mpampiasa ny mpandahateny rehetra - Mpanampy ao amin'ny Google Home dia afaka mandahatra baiko mifandraika amin'ny hetsika mihoatra ny iray. Ohatra: ny teny miafina iray dia mampirehitra jiro sy ny fahitalavitra, satria izany no fahazarana ananantsika rehefa miditra ao an-trano isika. Toa mahaliana ve? Ampahafantaro ahy raha manomana fitaovana bebe kokoa amin'ny Google Home izahay (antenaina fa hivoaka amin'ny tsena ihany ny kinova poloney tanteraka!)
Tianao ny lahatsoratrao? Toa anay ao amin'ny mombamomba anay Facebook!
Ianao dia liana amin'ny lohahevitra Smart Homes? Tongava aminay Vondrona Facebook!
Manana fanontaniana momba izany ianao Xiaomi? Mitadiava valiny momba anay Vondrona Facebook!
Ary raha, ankoatry ny famakiana ny momba ny teknolojia, dia te-hijery azy ianao, dia manasa anao amin'ny mombamomba anay izahay Instagram!
Fiat miaraka amin'ny tsipika fiara 500 Hey Google vaovao
Mpanampy Google, Fiat, fiat 500 hey google, samochody
Ilay mpanamboatra fiara italiana Fiat dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny goavambe teknolojia Google. Ny valiny dia andalana manokana misy fiara 500 Hey Google miaraka amin'ireo maodely 500, 500L ary 500X. Efa hatry ny ela ny orinasa teknolojia no manolotra ny vahaolana ...
Handoka ve i Siri tsy ho ela?
paoma, mpanampy feo, foza
Araka ny patanty nambara vao tsy ela akory izay, Apple dia manadihady ny vahaolana mety rehetra hamakafaka ny haavon'ny tabataba sy ny feo avy amin'ny tontolo iainana. Ity dia hanampy anao hifanaraka amin'ny feon'ny Siri Intelligent Assistant ary hiditra amin'ny Whisper Mode. Fampahalalana mitovy amin'izany ...
Google Nest Hub vaovao misy asa fanaraha-maso torimaso
Google, google akany
Google dia namoaka fananganana taranaka vaovao an'ny fampisehoana an-tsaina Nest Hub. Ireo fitaovana vaovao nohavaozina dia tsy dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny teo alohany, fa manana fiasa manara-maso matory mahaliana. Azo atao izany noho ny fampiharana ny radar Soli. Mampiavaka ny fitaovana ihany koa ny ...
Tolotra tsara ho an'ny fitaovana Google any ivelany.
Google, akaniny, vaovao
Mampalahelo fa ny iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny teknolojia dia tsy mivarotra eto amintsika. Noho io antony io dia tsy nahazo tolotra tsara izahay. Mazava ho azy fa momba an'i Google sy ny tolotra omena ny kojakoja ilaina Nest vaovao. Ireo vokatra Nest namelombelona tao ...